खोटाङ समाचार – MeroJilla.com
१२ वर्षपछि पुनः संसार देख्न पाउँदा दंग Tuesday, March 20th, 2018
खोटाङ – दृष्टि गुमेको १२ वर्षपछि पुनः संसार देख्न पाउँदा मनमा कति हर्ष होला ! त्यही हर्षको अनुभव संगालेकी छिन् खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–७ माक्पा नरुङकी १०२ वर्षीय अम्बीका दर्जीले। सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहान र नेपाल नेत्रज्योती संघ खोटाङले ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–३ ऐसेलुखर्क बजारमा आयोजना गरेको निशुल्क आँखा शल्यक्रीया शिबिरमा शल्यक्रीया गरिएकी दर्जीले..
पाँच वर्षदेखि टुक्रुक्क बसेको बस्यै
खोटाङ – भुईमा काठको मैलो फलेक तेस्र्याएर राखिएको छ। त्यही फलेकमाथि टुसुक्क बसेका छन् ३० वर्षीय उमेश गुरुङ। मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिका–३ बासपानीका उमेश पाँच वर्षदेखि यसरी नै टुसुक्क बसिरहेका छन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि बारेको कोठामा राखिएका उमेश न हिँडडुल गर्छन्, न उठबस नै गर्छन्। न रातमा रातका समयमा सुत्छन् नै। चौबिसै घण्टा एकै ठाउँमा..
आठ गाउँपालिमा सकियो ‘खोटाङ आईडल’, छनौटमा बालकदेखी बयष्कसम्म Wednesday, December 27th, 2017
चिसाङ शेर्पा पौष,१२ खोटाङ । नेपाल आईडल समापनको माहोल सेलाउदै गर्दा पुर्बी पहाडी जिल्ला खोटाङमा भईरहेको जिल्ला स्तरिय सांगितिक रियालिटी शो ‘खोटाङ आईडल’ अहिले बहुत चर्चामा रहेको छ । जिल्लामा रहेका कला र गलालाई बिश्वसामु पु¥र्याउन कुनाकन्दरामा लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजि निरन्तर भईरहेको छ । दुई नगरपालिका, आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा पहिलो चरणको लागि ११ स्थानमा अडिसन राखिएको..
नौ वर्षपछि जयराम पुल सञ्चालन, खोटाङमा खुल्यो समृद्धिको बाटो Friday, November 24th, 2017
खोटाङ, ८ मंसिर । जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दूधकोसी नदीमा निर्माण गरिएको मोटरेवल पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ । खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने जयरामघाटमा निर्माण गरिएको सो पुल शुक्रबार बिहानबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सम्झौता अबधि सकिएको पाँच वर्षपछि मात्र निर्माण कार्य सकिएको जयराम पुलमा बिहीबार एकै चोटी तीनवटा ठूला ट्रकमा १५० टनको लोड राखेर गरिएको..
हौंचुरमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि आर्थिक संकलन तीव्र प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म ६ लाख १५ हजार संकलन Tuesday, September 5th, 2017
चिसाङ शेर्पा खोटाङ २० भाद्र खोटाङको लामिडाडाँ गाउँपालिकाको हौंचुरमा एम्बुलेन्स खरिदका निम्ती एम्बुलेन्स सेवा समिती गठन गरिएको छ । स्थानीय गजेन्द्र राईको संयोजकत्वमा पालिकाको ६ नम्बर वडाका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्नलाई समिती तयार पारिएको हो । गत साउन २६ मा गठन गरिएको समितीले नेपालसहित विभिन्न मुलकमा स्वेच्छिक सहयोग संकलन गरिरहेको समितीका संयोजक राईले बताए । हौचुरवासी..
विबाहका लागि केटी हेर्न गएका शेर्पाकोे जीप दुर्घटनामा मृत्यु Saturday, September 2nd, 2017
चिसाङ शेर्पा खोटाङ, १७ भदौ । विबाहका लागि केटी हेर्न जाँदै गरेका युवकको ओखलढुंगामा सुमो जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएको छ । काठ्माण्डौंबाट यात्रु लिएर ओखलढुंगाको खिजीफलाँटे जाँदै गरेको ना १ ज ५६७८ नम्बरको सुमो पल्टिँदा सोलुखुम्बु बाकु–९ का ३७ वर्षीय ल्हाक्पा देण्डी शेर्पाको मृत्यु भएको हो । ११ जना सवार जीप खिजीदेम्बा गाउँपालिका–३ खिजीचण्डेश्वरीमा दुर्घटनामा परेको..
लफ्याङमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता, वडाध्यक्ष निर्मल राई Tuesday, August 29th, 2017
चिसाङ शेर्पा खोटाङ १३ भदौ । रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकास्थित लफ्याङमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकताका साथमा बृहत सुधार कार्ययोजना लागू गरिएकोे वडाध्यक्ष निर्मल राईले बताउनुभयो । समाज परिवर्तनको मुल कारण नै शिक्षा तथा शिक्षाविना केही सम्भव नभएकाले शिक्षालाई आफ्नो कार्यकालभित्रमा मुल विषय बनाए लफ्याङका वालवालिकाको भविष्य सुनिश्चित गरिने वडाध्यक्ष राईले बताए । गत असार १४..
खोटाङमा फर्जी विधार्थी भर्ना गर्ने विद्धालय ५ महिनादेखी वन्द
चिसाङ शेर्पा,खोटाङ १३ भदौ । फर्जी विधार्थी भर्नागरी विद्धालय सञ्चालन भइरहेको रहस्य खुलेपछि खोटाङमा एक विद्धालय ५ महिनायता पुर्णरुपमा वन्द छ । लामीडाडाँ (रावावेशी) गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा हौंचुरस्थित पञ्चकन्या आधारभुत विद्धालय वन्द भएको रहस्य खुलेको हो । गतवर्ष भदौ २९ गते विजुली सर्ट भएर जलेको विद्धालय ७ महिना न्युन विधार्थी संख्यामा चलिरहेको भए पनी जिल्ला शिक्षा..
खोटाङमा भाइरल ज्वरोको बिमारीको चाप Monday, August 28th, 2017
खोटाङ, १२ भदौ । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा भाइरल ज्वरोको बिमारीको चाप बढेको छ । मौसम परिवर्तन भएसँगै जिल्ला अस्पतालमा शरीर दुख्ने, अधिक ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेलगायतका लक्षण देखिने भाइरल ज्वरोको बिरामीको चाप बढेको हो । चिसो सुरु भएसँगै दैनिक १ सय ५५ जनाको हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आइरहेका जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख डा.रामबहादुर केसीले जानकारी दिए । जटिल..
आवाश्यकता भन्दा वढी सडक खनिंदा वन उच्च जोखिममा Monday, August 21st, 2017
चिसाङ शेर्पा खोटाङ ०५ भदौ । मध्यपहाडी लोगमार्गको विजुले – हुर्लुङसम्म १२ किलोमिटर सडक अन्तरगतको नुनथला पानीट्याङकी भञ्ज्याङदेखी हुर्लुङसम्मको सडक आवाश्यकताभन्दा बढी खनिंदा दुई सामुदायिक वन उच्च जोखिममा रहेको छ । नाली बाहेक सवा ५ मिटर कालोपत्रे १ मिटर ग्राभेलसहित सवा ६ मिटर सडकका लागि पुराना सडकलाई सर्कार्दै साँढे ६ मिटर खन्नुपर्नेमा ८ मिटरभन्दा बढी सडकको भित्ता..
खोटाङमा सडकसंगै मुहार फेर्दै नुनथला, यस्तो छ इतिहास (फोटो फिचर) Sunday, August 20th, 2017
चिसाङ शेर्पा, खोटाङ ०४ भदौ । साविकका पाँच नम्बर वडाको माथिल्लो भेगमा खार्पाली बाहुनहरुले खर्क बनाइ वर्षदिनमा एकपटक खला बनाएर गाई, भैसीलाई नुन चटाउने परम्परा अपभ्रस हुंदै जाँदा नुनथलाको नाम रहेको इतिहास पाईन्छ । २०१७ सालमा एउटा पनि विधालय नभएको नुनथलाका वालवालिकाहरु खार्पा गाविसको रुभुङमा स्थापना भएको जालपा (ठ्याक्कै मिति प्राप्त नभएको) मा. वि मा अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता..